आज पनि बढ्यो सुन र चाँदीको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो ? – SUDUR MEDIA
आज पनि बढ्यो सुन र चाँदीको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो ?
May 31, 2021 AdminLeaveaComment on आज पनि बढ्यो सुन र चाँदीको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो ?
आज सोमबार पनि सुन र चाँदी दुबैको मूल्य बढेको छ। आज दिनमा सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदीको भाउ तोलामा ५ रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासँघका अनुसार सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ७०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ।
अघिल्लो दिन हिंजो आइतबारको दिन छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार र तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ५०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो । यस्तै आज सोमबार चाँदी पनि तोलामा ५ रुपैयाँले बढेर १ हजार ३६० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । अघिल्लो दिन हिंजो चाँदी प्रतितोला १ हजार ३५५ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः प्रेमी गरीब भयो भनेर छोडेकी प्रेमिकाको भयो नसोचेको हालत , हेर्नुस सबैको आँखा बाट आँशु आउनेछ (भिडियो सहित) ! पछिल्लो समय निकै राम्रा चलचित्र छोटा चलचित्र साथै म्युजिक भिडियो लगायत धेरै मनोरञ्जनका सामग्रीहरु आइरहेका छन । चलिरहेका सिरियलहरु लकडाउनका कारण बन्द भएका कै समयमा तयार पारिएको धाराबाहिक मनै छुने शृंखला नाता चाँडै नै युटुबमा आउन लागेको छ ।
शिशिर बुढाथोकीको निर्देशनमा तयार हुने सो शृंखला पूर्व झापाबाट तयार गरिन्छ । विभिन्न टेलिश्रृङ्खलाहरुमा अभिनय गरेर छाप छोडिसकेका कलाकार तथा संचारकर्मी समीर सुबेदी (चिबे बुढो) र आइन्द्र लिम्बु (कोपा) ले पनि धेरैपछि यसै नाता नामक टेलिचलचित्रबाट फेरि सुरुवात गर्दै छन् । विभिन्न हाँस्यटेलिश्रृंखला हँसाउने उनीहरुले यसमा भने सबैलाई रुवाउने छन ।
नातामा शिशिर बुढाथोकी समिर सुबेदी ज्ञानेन्द्र कोईराला आइन्द्र लिम्बु प्रणाली पुष्पा देविका भुजेल लगायत धेरै कलाकारको अभिनय रहनेछ । नाता टेलिचलचित्रकै टिमले पारेको मनै छुने छोटो फिल्म गरिब प्रेमी अहिले साथी फिल्मसको व्यानरमा युट्युबमा आइसकेको छ । गरिब र धनीबीचको प्रेमलाई यसरी चित्रण गरिएको छ कि हेर्दा सबैको आँखा रसाउने छ । तलको भिडियोमा हेर्नुहोला तपाईं रुनुहुनेछयो भिडियोमा एक प्रेमी र प्रेमिकाको बारेमा कथा तयार पारिएको छ।
पारसले छोरा हृदयेन्द्रको भिडियो सेयर गर्दै लेखे यस्तो, छोरा पनि बाबुको आर्शिवाद लिन पुगे ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
सपनामा के देखे के हुन्छ ? यी हुन् ६५ सपनाका फलहरू…..
टिकटकमा भाइरल ७० बर्षिय आमाको घरमा पुग्दा जे भयो, बुढेसकालमा टिकटकले जगायो कलाकारिता ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
प्रेमीसंग निस्किएकी बिना भिडियो कल गर्दागर्दै फिल्मि सैलिमा गायब, प्रेमीको बारेमा यस्तो खुलासा गर्दै बिनाकी आमा मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
बङ्गलादेशमा आइतबार छ हजारभन्दा बढी कोरोना स’ङ्क्रमित, १३४ को मृ’त्यु